u wareego waqti dhiman
Shaqaale waqti-buuxa ah ayaa laga yaabaa in loo ogolaado inuu u wareego waqti-dhiman-ha ahaato qayb ka mid ah wadaagga shaqada, ama si fudud sida dhimista saacadaha shaqada-oo weli ku sii wato isla booskii. Isbedelkaani wuxuu noqon karaa ku meel gaar ama mid joogto ah.
Waxay siisaa wakhti badan oo lagu daboolo baahiyaha qoyska
Doorka shaqada waqti-dhiman ka mid ah
noocyo kala duwan oo habayn shaqo beddelka ah ee ganacsiga beeraha caalamiga ah
Tracy Johnson waxay u shaqeysay Cargill waqti dhiman 15 sano, iyadoo korinaysa carruurteeda. Maanta, isagoo ah Hoggaamiyaha Xiriirka Shaqaalaha ee Waqooyiga Ameerika, Johnson wuxuu ka caawiyaa inuu u dhigo shirkadda sidii "loo shaqeeyaha doorashada" qayb ahaan iyada oo loo marayo dabacsanaan, qabanqaabooyin shaqo oo kale.
"Aniga ahaan, dabacsanaanta shaqada waqti dhiman ayaa isbeddel weyn ku samaysay shaqadeyda iyo nolosha qoyska," Johnson ayaa yiri. "Waxaan awooday inaan horumariyo xirfadayda oo aan qaado inta badan mas'uuliyadaha daryeelka ilmaha si aan ugu shaqeeyo qoyskayga. Waan ogahay dumar kale oo shaqada ka tagay markay caruurtoodu yaraayeen oo aakhirkii u halgamay sidii ay u gaadhi lahaayeen yoolkooda xirfadeed. Daawashada waayo-aragnimadooda waxay iga dhigtay inaan aad uga mahadceliyo Cargill, waxaana ahaa shaqaale daacad ah oo ku hawlan tan iyo 1998-kii."
Johnson wuxuu qabaa in dabacsanaanta xoogga shaqadu ay ka caawiso shirkadaha inay sii hayaan haweenka gaar ahaan, in kasta oo dhammaan shaqaalaha Cargill ee aan wax-soo-saarka ahayn ay u qalmaan habayn shaqo oo kale. Marka la eego mas'uuliyadaha daryeelka dhaqameed iyo doorka jinsiga, haween badan ayaa ka faa'iideysanaya dabacsanaanta, sida uu qabo Johnson.
Nidaamyada shaqo ee beddelka ah waa siyaasadda Cargill oo bixisa doorashooyin ka baxsan qaabka shaqada caadiga ah (xafiiska dhexdiisa, 9 subaxnimo - 5 galabnimo, shan maalmood/toddobaadkii). Kuwaas waxaa ka mid ah: shaqo waqti-dhiman, saamiyo shaqo, saacadaha la dhimay, usbuuca shaqada oo ciriiri ah, iwm. Waxa kale oo jiri kara dabacsanaan marka shaqada lagu qabto (xafiiska iyo guriga). In kasta oo ay jiraan jagooyin fog fog, waa boqolkiiba in yar oo ka mid ah shaqaalaha Cargill. Shaqaale aan wax soo saar lahayn oo mushahar qaata iyo saacadle ah ayaa soo gudbin kara arji qeexaya qaabaynta shaqo ee beddelka ah ee ay soo jeedinayaan, taas oo u baahan in uu ansixiyo maamulahooda. (Shaqaalaha wax soo saarka, eeg daraasaddan.)
"Cargill, waxaan rabnaa inaan noqono loo shaqeeyaha doorashada," Johnson ayaa yiri. "Marka shaqaaluhu ay haystaan ikhtiyaar, waxay u muuqdaan inay u heellan yihiin shirkadda, iyagoo qadarinaya dheelitirnaanta nolosha shaqada iyo dabacsanaanta. Isla mar ahaantaana, shirkadu waxay faa'iido u leedahay soo jiidashada iyo sii haynta shaqaalaha ee Maraykanka oo dhan."
Goobta: Wayzata, MN
Warshadaha: Bio-warshadaha iyo beeraha
Hagaha Raritaanka Shaqaale Wakhti Buuxa oo Loo Gudbinayo Qayb-Waqti - Workest (zenefits.com)